Hetsika fanoherana ny fanolorana mpitsoaponenana meloka, sary fanehoana “amina endrika tsy tena izy” ataon’ny mpanakanto iray ao Hong Kong an’izany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2019 4:57 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, 日本語, русский, عربي, English
Ny Rindrina Lennon ao Honk Gong no asa ara-javakanto niombonana izay naka ny anarany avy amin'ny rindrina voalohany noforonina tao Prague, taorian'ny nahafatesan'ny mpihira John Lennon. Niseho voalohany ny dika rindrina raritakelaka (mosaïque) nataon'i Hong Kong nandritra ny Hetsika Elobe tamin'ny taona 2014 rehefa nalefan'ireo mpanohitra ny sarin'ireo naoty an-taratasy miloko marevaka miraikitra miaraka amin'ireo hafatra fanohanana teo amin'ny tohatra miakatra mankao amin'ireo Biraon'ny Governemanta Foibe. Nandritra an'ireo hetsiky ny taona 2019 fanoherana ny fanolorana mpitsoaponenana meloka, namboarina indray ilay rindrina ary nipoitra nanerana ny Nosy ireo rindrina Lennon hafa.
Ny sary navoaka etsy ambony, mampiseho ny endrika ivelan'ny foibentoeran'ny governemantan'i Hong Kong rakotra an'ireo naoty amin'ny taratasy araikitra, dia vao haingana no nanjary nalaza teny anatin'ireo media sosialy tao Hong Kong. Ny artista voalohany nipoiran'ny sary dia Tommy Fung, mpaka sary sy mpanao sary, izay namorona ny kaonty media sosialy Surreal Hong Kong mba hanehoana hevitra mikasika ny fiainana ao Hong Kong.
Rehefa nanontaniana azy raha manan-kolazaina izy ho an'ireo mpanjohy ny Global Voices, namaly tamina fehezanteny iray manohana an'i Hong Kong i Fung sy tamin'ny iray tamin'ireo teny filamatra tena malaza indrindra tao anatin'ireo fihetsitsehana manohitra ny fanolorana mpitsoaponenana meloka, manao hoe: Mandranitra i Hong Kong!
Mba hamakiana misimisy kokoa mikasika ny fanoherana ny fanolorana mpitsoaponenana meloka ao Hong Kong, tsidiho ny pejy manokana an'ny Global Voices.